Nbudata FNAF UCN maka gam akporo (Egwuregwu Mod) - Luso Gamer
Ụdị FNaF ọhụrụ erutela n'ahịa wee daa ngwa ngwa. Ndị na-akwado nnukwu egwu egwu na egwuregwu egwuregwu. Kwesịrị ibudata ma wụnye ụdị FNAF UCN Apk ọhụrụ emezigharịrị. Nke ewepụtara n'ahịa n'oge na-adịbeghị anya na ndị egwuregwu hụrụ mgbakwunye ọhụrụ n'anya kpamkpam.
Ọ bụ ezie na abalị ise na Freddy enweelarị ọnọdụ dị mma n'etiti ndị egwuregwu. Ma ugbu a, ndị egwuregwu na-atụ anya ihe ọhụrụ na pụrụ iche. Ebe ndị na-egwu egwuregwu nwere ike ijide njikwa zuru oke na egwuregwu gụnyere animatronics.
Mashup ọhụrụ a Egwuregwu RPG ewepụtara ya n'ahịa ụbọchị ole na ole gara aga. Ma ọtụtụ ndị egwuregwu android na-edebanye aha mkpesa gbasara enweghị ike ịnweta Apk arụ ọrụ. Mana ugbu a ndị egwuregwu nwere ike ibudata egwuregwu FNAF UCN ngwa ngwa site na iji otu pịa nhọrọ.
Kedu ihe bụ FNAF UCN Apk
FNAF UCN Apk bụ ụdị egwuregwu FNaF gbanwetụrụ. Ebe a na-emegharị ihe nhụsianya na ihe gụnyere isiokwu. Yabụ na ndị egwuregwu nwere ike ịnụ ụtọ ahụmịhe dị adị nke gụnyere ndozigharị ụlọ ọrụ yana atụmatụ mgbapụ.
N'ime ụdị gọọmentị, a na-amanye ndị egwuregwu ọtụtụ mmachi dị iche iche. Ọbụna a naghị ekwe ka ha nwee obi ụtọ na ịchịkwa usoro dum. Iji nweta njikwa nwere ike ịchọ ọtụtụ ihe, ndị a na-ahazi na ụlọ ahịa amachibidoro.
Ruo ma ọ gwụla ma ndị egwuregwu na-eme nke ọma n'ịkpọghe ihe ndị ahụ. A na-ewere nke a na ọ gaghị ekwe omume ịkwado ọkwá n'ime ụlọ ọrụ ruo ogologo oge. Ya mere, n'ịtụle oghere ndị a niile na aro ndị egwuregwu, ndị mmepe mechara hazie ụdị gbanwetụrụ.
Ebe ihe karịrị 50 gbakwunyere animatronics dị iche iche dị ịhọrọ. Cheta animatronics ndị ọzọ na-achịkwaghị achịkwa nọ ebe ahụ igbu gị. Ọ bụrụ n’ikwenye na atụmatụ mgbapụ ga-arụ ọrụ nke ọma wee bute mmeri ozugbo wee budata FNAF Ultra Custom Night Apk.
aha Ụlọ ọrụ FNAF UCN
Mmepụta Pịateteam USA LLC
Aha ngwugwu com.clickteam.ultimatecustomnight
Category Game - Action
Dị ka ndị mmepe si kwuo, a na-agbakwunye ọtụtụ ngwaọrụ nhazi ndụ. Nke ahụ na-enye ndị egwuregwu ohere gbanwee gbakwunyere hazie agwa anime kachasị amasị ha n'ime obere oge. Naanị ihe ha chọrọ ime bụ naanị họrọ agwa na ịkụnye ụfọdụ ihe na-agbanwe igodo.
A na-enye ndị egwuregwu ugbu a nhọrọ zuru oke ịhọrọ agwa ndị iro. gbakwunyere nwere ike ịmepụta ngwakọta agwakọta agwakọta nke anime zuru oke. Enwere ike ịgbatị ọkwa isi ike site na 0 ruo 20. Naanị nweta ụdị egwuregwu na-arụ ọrụ ma nwee ọmarịcha mmetụta.
Anyị kwenyere na ọ bara uru ịkọ banyere oghere oghere na-eduga animatronics n'ọfịs. Ndị a bụ ventilashị ikuku abụọ na hoses, isi ụzọ isi na AC Duck. Cheta na isi oghere ndị a nwere ohere nwere ike iduga ndị na-egbu mmadụ gaa n'ọfịs.
Otu ihe anyị na-echefu ịkọ bụ ịmụta banyere ọrụ ngwá ọrụ dị iche iche. N'ihi na ime ihe ndị ahụ ga-enyere aka ịlanarị n'ime ụlọ ọrụ pụrụ iche. Onye na-egwu egwuregwu chọrọ ka ọ mụta ịrụzi AC, ndị na-emepụta ọkụ, ndị na-ekpo ọkụ na igbe egwu ụwa.
Ewezuga ịmara akụrụngwa ndị a niile, onye egwuregwu ahụ nwekwara ike ịkụnye ọnyà laser booby ọtụtụ. Ịkụnye ọnyà ndị ahụ na-enyekwa aka kpochapụ ndị na-egbu egbu. N'ihi ya, ị hụrụ egwuregwu ahụ n'anya ma dị njikere ịnụ ụtọ ahụmịhe egwuregwu egwuregwu wee wụnye FNAF UCN Free Download Android.
Ịwụnye egwuregwu ahụ na-enye egwu na ahụmahụ omume.
Faz-coins nwere ike ịchọ maka imeghe pro ihe.
Enwere ike nweta mkpụrụ ego na-ekere òkè na egwuregwu.
A na-agbakwunye ọtụtụ animatronics.
Ihe dị ka 50 gbakwunyere ihe egwuregwu ụmụaka dị maka ịhọrọ.
The egwuregwu interface bụ ike na mobile-enyi na enyi.
dashboard ntọala dị elu na-enyere aka gbanwee atụmatụ isi.
Otu esi ebudata FNAF UCN Apk
N'ebe ahụ, ọtụtụ weebụsaịtị na-ekwu na ha na-enye faịlụ Apk ndị yiri ya n'efu. Mana n'eziokwu, weebụsaịtị ndị ahụ na-enye faịlụ adịgboroja na ndị mebiri emebi. Yabụ kedu ihe ndị ọrụ gam akporo kwesịrị ime n'ọnọdụ dị otú a mgbe ha enweghị ike ịchọta isi iyi iwu?
N'ọnọdụ dị otú ahụ, anyị na-akwado ndị egwuregwu gam akporo ahụ gaa na webụsaịtị anyị. N'ihi na ebe a na webụsaịtị anyị, anyị na-enye naanị ezigbo faịlụ Apk mbụ. Iji wụnye FNAC UCN Nbudata efu biko pịa njikọ enyere n'okpuru.
Ngwa egwuregwu anyị na-akwado ebe a bụ naanị izizi. Agbanyeghị, anyị enweghị ikike nwebiisinka, anyị agaghịkwa ebute nsogbu ọ bụla. Tupu ịnye Apk n'ime ngalaba nbudata, anyị wụnye ngwa n'elu ekwentị dị iche iche maka nyocha nchekwa.
Ruo ugbu a, a na-ebipụta ọtụtụ ụdị FNAF dị iche iche gbanwetụrụ ebe a. Iji nyochaa ma kporie ndụ ụdịdị ndị ahụ, biko tinye egwuregwu ndị a kpọtụrụ aha. Kedu ndị bụ Enyemaka FNAF chọrọ Apk na FNAF Nche mmebi iwu Apk.
N'ihi ya, ị hụrụ ụdị FNaF ọhụrụ a gbanwetụrụ ma dịrị njikere ka gị na ndị enyi gị kpọọ ya. Kedu ihe ị na-eche? Naanị budata ụdị FNAF UCN Apk kacha ọhụrụ. Nke ahụ nwere ike ịnweta site na ịpị bọtịnụ njikọ nbudata dị n'okpuru.
Categories Action, Egwuregwu Tags FNAF UCN Apk, Nbudata FNAF UCN n'efu, FNAF UCN budata gam akporo, Egwuregwu FNAF UCN, Egwuregwu RPG Mail igodo